गण्डकी प्रदेश Archives – Page 227 of 262 – Samacharpati
पोखरा, ७ साउन । गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले भिरकोट नगरपालिका वडा नं. ७ छाङछाङदी स्थित छाङछाङदी शिब मन्दिरको दर्शन गरेका छन् । साउनको पहिलो सोमबार उनले मन्दिर दर्शन गर्नुका साथै विधिपूर्वक पूजाआजा गरेका हुन् । मन्दिर दर्शनपछि प्रदेश प्रमुख कुवँरले छोटो मन्तव्य दिँदै मान्छेलाई आफू ठूलो र सानो भन्ने भ्रम भएकाले समभाव राख्न सके मात्रै सफल […]
समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत प्रहरीसंग एक दिन कार्यक्रम सम्पन्न
पोखरा, ७ साउन । मिति २०७६ श्रावण ६ गते समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत प्रहरीसंग एक दिन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिका २५ हेम्जा स्थित हेम्जा बोर्डिङ स्कूलका कक्षा ८ मा अध्ययनरत ४० जना विद्यार्थीहरुलाई प्रहरी सेवा प्रवाहको प्रणाली, प्रहरी सेवाको किसिम र समुदाय प्रहरी साझेदारी लगायतका अवधारणाका विषयमा प्रष्ट पारिएको छ । […]
स्याङ्गजा, ७ साउन । स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका ६ दरौ–थाप्लेमा निर्माणाधिन बुद्ध मुर्तिका लागि बेलायतमा रहेका नेपालीहरुले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । जुनकिरी च्यारिटी ग्रुपका सदस्य, समाजसेवी पार्बती गुरुङको पहलमा संकलित ३० लाख रुपैया सोमबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बिच निर्माण समितिलाई प्रदान गरेका हुन् । दरौ–थाप्ले बुद्ध मुर्ति निर्माण समितिका संयोजक बिश्व गुरुङ, संयोजक […]
पोखरा, ७ साउन । मिति २०५६ माघ ४ गते साझँ १८:३० बजेको समयमा साबिक जिल्ला कास्की घान्द्रुक गा.बि.स. वडा नं.७ (हाल अन्नपूर्ण गा.पा. ११ ) बस्ने बर्ष ३१ को मन प्रसाद गुरुङलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी सख्त घाईते बनाई फरार रहेका सोही स्थान बस्ने तत्काल बर्ष ३६ का कुमार गुरुङ लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ […]
पोखरा, ७ साउन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले विभिन्न संघसंस्थाले गरेका अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र तथ्याङ्क विकास लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताउनु भएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्टस, इन्टर डिसिप्लिनरी एनालिसिस र द एशिया फाउण्डेसनद्धारा सर्मेक्षण गरिएको तथ्याङ्क सोमबार पोखरामा सार्वजनिक गर्दै उहाँले प्राप्त तथ्याङ्ककै आधारमा विकासका योजना तय हुने बताउनुभयो […]
वालिङ, ६ साउन । स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको वालिङ नगरपालिकाले कार्यालयभित्र स्तनपान कक्ष सञ्चालन गरेको छ । नगरपालिकामा विभिन्न कामका लागि आउने सेवाग्राही महिला तथा महिला कर्मचारीलाई लक्ष गरी कार्यालयभित्र सो कक्ष सञ्चालन गरिएको हो । कार्यालयमा सेवा लिन आउने महिला सेवाग्राहीले सार्वजनिक स्थलमा शिशुलाई स्तनपान गराउन लाज मान्ने गरेकाले उक्त कार्यालयले स्तनपान कक्ष निर्माण […]
पोखरा, ६ साउन । सिद्धार्थ क्लब पोखराले आफ्नो स्थापनाको ३५औँ बार्षिकोत्सब कार्यक्रम ज्येष्ठ अभिभावकहरुलाई सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरि सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा सिद्धार्थ क्लबका संस्थापक अध्यक्ष नविन उलकले क्लब स्थापना काल समयको सम्झना गराउदै त्यस बेलाको मेहेनत र परिश्रम विस्तार हुदै क्लब प्रगतिको बाटोमा लम्कन सफल भएको भनाई राख्नुभयो । कार्यक्रममा […]
कास्की, ६ साउन । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा प्रवेशको मुख्यद्वार पोखरा महानगरपालिका–१४ र २६ जोड्ने गरी विजयपुरमा निर्माण गरिएको डाइभर्सनमा बाढीले पुनः क्षति पुर्याएको छ । आइतबार रातिको बाढीले डाइर्भसनमा क्षति पुर्याउँदा आज बिहानबाट ठूला यातायातका साधन अवरुद्ध बनेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रले बताउनुभयो । शनिबार राति पनि डाइर्भसन बगाएपछि […]
केफ मा.बि सिमपानीमा भर्ना भइ आएका बिद्यार्थीलाई स्वागत
हेमजा, ६ साउन । केफ मा.बि सिमपानीमा अध्यनरत कक्षा १२ का विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना भइ आएका बिद्यार्थीलाई आइतबार स्वागत गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले विद्यार्थीको गहना भनेकै अनुशासन भएको बताउदै विद्यार्थीलाई अनुशासन हुन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा प्लस टु कोडीनेटर नबिन अधिकारी प्यासी, विद्यार्थी प्रसिदिका […]
पोखरा, ६ असार । सरकारले लागु गरेको वेभमा आधारित सामान ढुवानीमा अनलाइन ट्रयाकिङ प्रणाली खारेजीको माग गर्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पोखरामा आइतबार बिरोध र्यालीको आयोजना गर्यो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सचिवालय गैह्रापाटनबाट सुरु भएको र्याली पोखराको मुख्य बजार क्षेत्र महेन्द्रपुल, चिप्लेढुंगाहुँदै गै्रहापाटनमै पुगेर समापन भएको थियो । र्यालीमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यबाहक […]
पोखरा, ६ साउन । पोखरा ८ बगाले टोलमा रहेको हिमाल कलेज अफ म्यानेजमेन्टले कक्षा ११ मा व्यवस्थापन संकाय र होटल व्यवस्थापन संकायका भर्ना भएका विद्यार्थीलाई स्वागत गरेको छ । हिलसाइड बोडिङ स्कुलको सहकार्यक्रमा कलेजले कक्षा ११ र १२ यस वर्ष देखी सञ्चालन गरेको हो । आइतबार एक कार्यक्रम गरेर कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई […]